Yiziphi Izici Ezifihliwe Ze-Gmail? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
May 12, 2021 0 Comentarios 505
Kwesinye isikhathi siyakuzwa lokho sichitha amahora amaningi sihlola iposi futhi siya ebhokisini lokungenayo lokhu kwenzeka namanye amapulatifomu futhi mhlawumbe nge-Gmail. Kodwa-ke, iGoogle yenze abasebenzisi bazuze kakhulu ku-Gmail yabo ngamathuluzi wokuqeda imisebenzi ephindaphindwayo.
Yini imisebenzi efihliwe ye-Gmail.
Thumela ama-imeyili akho ku- "Ukulala": Lo msebenzi ukuvumela ukuthi ukhethe ama-imeyili bese ususa ibhokisi lokungenayo ukuze uwusethe ngosuku olusha, okungukuthi, ibhokisi lokungenayo lizovela ngesikhathi esibonisiwe. Ukuze wenze lokhu kufanele usebenzise ithuluzi elithi "Snuza" noma "Snuza".
Ukuzikhumbuza: I-Gmail ibeka ama-imeyili phezulu ebhokisini lokungenayo ngokuzenzakalela esimweni sokungalandelelwa izinsuku ezimbalwa.
Hlela umcimbi ngeKhalenda kusuka ku-Gmail: Ikhalenda uhlelo lwe-Google, olutholakala ngakwesokunene se-Gmail futhi likuvumela ukuthi uhlele umcimbi noma ukhethe isikhumbuzi.
Inhlangano enemininingwane: Sebenzisa amalebuli nezihlungi ezizokuvumela ukuthi uhlele ama-imeyili angena evela kumamukeli othile noma okushiwo ngegama elithile, lokhu kuzokwenziwa ngokuzenzakalela.
I-Gmail ibikezela ukuthi uzothayipha ini: I-Gmail inezici ezimbili ezihlakaniphile ezikuvumela ukuba uqedele imisho futhi unikeze izimpendulo zemiyalezo engenayo. Ukuze wenze lokhu kufanele usebenzise i- "Smart Reply" noma "Smart Compose", imisebenzi ekulondolozela izinkulungwane nezigidigidi zezinhlamvu ezingabhalwanga.
Amakheli amaningi e-imeyili: Uma kwenzeka ufuna ukuba nenombolo ethile yezinguqulo kukheli lakho, engeza isikhathi sokugcina kukheli lakho le-imeyili. Ngokwesibonelo: [i-imeyili ivikelwe] ukuthi [i-imeyili ivikelwe]. O [i-imeyili ivikelwe] noma yikuphi ukwehluka, iGoogle ithumele ama-imeyili afanayo.
Izinqamuleli zekhibhodi: Ikuvumela ukonga isikhathi nokufinyelela ngqo, ukuthola ibhokisi elivelayo okufanele ulicindezele? futhi uhlu olulandelayo luzovela:
I-Ctrl + Faka kusho ukuthumela umlayezo.
I-Ctrl + Shift + b kusho ukwengeza abamukeli be-Bcc.
Ctrl + Shift + c kusho ukwengeza abamukeli be-cc.
Ctrl +. kusho ukudlulela ewindini elilandelayo.
Izinqamuleli ezithuthukile: Inomsebenzi wezinqamuleli ezenziwe ngezifiso futhi ziyahlukahluka lapho uvula iwindi elisha lokuqamba uze uhambise ingxoxo kudoti.
Ukuze wenze lezi zilungiselelo ezithuthukile kufanele uhambe:
Ishadi lezilungiselelo ekhoneni eliphezulu kwesokudla.
Ukufinyelela okuqondileikhibhodi s.
Uhlu lwezilungiselelo ezithuthukile:
/: faka ikhesa ebhokisini lokusesha
c: qamba umlayezo omusha
d: qamba umyalezo kuthebhu entsha
Yenza isipele imilayezo yakho: Uma ufuna ukwenza isipele semiyalezo yakho, kufanele ubhalise ku-akhawunti ye-imeyili eyenza ikhophi eyisipele futhi uyilungiselele kwi-akhawunti yakho ye-Gmail, ukuze ngithumele ama-imeyili kubhokisi lokungenayo eliyinhloko.
I-POP / IMAP.
Bese uthumela kabusha ikhophi le-imeyili engenayo.
Gcwalisa ikheli kweposi.
1 Yini imisebenzi efihliwe ye-Gmail.
2 Ukuze wenze lezi zilungiselelo ezithuthukile kufanele uhambe:
3 Uhlu lwezilungiselelo ezithuthukile:
4 Yenza okulandelayo:
Yini imisebenzi ye-Gmail?